Tsy nisy akory ilay hoe fanafihana mitam-piadiana: telo vavy mpiasan’ny Shop Airtel cité Itaosy naiditra am-ponja | NewsMada
Par Taratra sur 14/02/2020
Tsy nisy akory ilay hoe fanafihana mitam-piadiana tao amin’ny Shop Airtel, cité Andranonahoatra Itaosy, ny talata tolakandro lasa teo. Mpiasa tao ihany no nikononkonona sy niketrika ny tetika rehetra. Efa naiditra am-ponja vonjimaika, omaly tolakandro, ny telo (vehivavy) amin’izy ireo, araka ny loharanom-baovao azo avy amin’ny zandarimariam-pirenena.
Efa nampoizina ihany! Mipoitra tsikelikely izao ny marina rehetra momba ilay raharaha fanafihana Shop Airtel, nitranga teny amin’ny Cité Akany Sambatra, Andranonahoatra Itaosy izay nampisavorovoro sy niteraka resabe teny an-toerana sy tany anaty tambajotran-tserasera ”facebook”. Noraisin’ny zandary an-tanana ny fanafihadiana sy famotorana rehetra momba ity voalaza fa fanafihan-jiolahy ity. Nisy ny fanadihadiana lalina nataon’ny zandary ka niroso tamin’ny fihainoana sy fakana am-bavany ireo mpiasa telo vavy tao amin’ity Shop Airtel ity izy ireo. Isan’izany ny tompon’andraikitry ny sampandraharaha misahana ny mpanjifa (service clientèle), ny tompon’andraikitra misahana ny fandraisana ireo mpanjifa (responsable accueil) ary ny tompon’andraikitra iray misahana ny fanentanana ny lafiny doka varotra (animatrice de vente). Teo koa ny fisian’ireo lehilahy roa voalaza fa hoe jiolahy nitondra basy izay niditra an-keriny tao amin’ity shop ity. Nohamafisin’ny sampandraharaha misahana ny fampitam-baovao eo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa efa voaomana mialoha ary karazan’ny horonantsarimihetsika ihany ny nataon’ireto mpiasan’ny Shop Airtel ireto fa tsy nisy akory ilay fanafihan-jiolahy. Nandalo tsirairay teo anoloan’ny zandary mpanao famotorana izy telo vavy, saingy samy manana ny filazany momba ity hoe fanafihana ity.
Raha nanontanian’ny zandary izy telo vavy mpiasa ireto dia samy nanana ny filazany momba ny fitaovam-piadiana hoe nentin’ireo jiolahy nanafika. Ireo mpiasa roa vavy nilaza fa hoe nitondra antsy ireo jiolahy, nandritra ity fanafihana raha nilaza kosa ny iray fa nitondra basy PA. Mifamahofaho be ny fanazavan’izy telo vavy nandritra ny famotoran’ny zandary ary samy nanana ny filazany avy izy ireo. Nilaza ihany koa izy ireo tamin’ny zandary mpanao famotorana fa efa nahavita nandamina ny kaonty rehetra tao amin’ilay shop tamin’ny 3 ora sy 30 mn ary niverina nisokatra indray tamin’ny 4 ora hariva. Eo no nampiahiahy ny zandary tamin’ity raharaha ity, araka ny fampitam-baovao voaray hatrany. Nilaza ny mpiasa vavy iray fa hoe telo minitra monja taorian’ny fisokafan’izy ireo no nitranga ny fanafihana raha 10 minitra taorian’ny fisokafan’izy ireo no nolazain’ny mpiasa vavy iray faharoa. Araka izany, mifanohitra be ihany ny fanazavan’izy telo vavy ka nampiahiahy ary nahatonga ny zandary nitazona azy ireo avy hatrany. Natolotra ny fampanoavana, omaly tolakandro avy hatrany izy ireo, taorian’ny famotorana nataon’ny zandary ka izao nidoboka am-ponja vonjimaika eny Antanimora izao.
Jean Claude sy Henintsoa Hani